Shaqooyinka Dubai Shaqaalaysiinta waxaa laga heli karaa Dubai iyo Abu Dhabi
Shaqo qorista Dubai - Imaaraadka Carabta
Shaqooyinka Dubai ee Qorista - Waxaan hadda qoraynaa
Shaqooyinka Dubai ee Recruitment ee ajniga. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdayada, caawinta shaqaalaha cusub. Gaar ahaan midka leh khibrad wanaagsan. Tusaale ahaan, haddii aad shaqo ka raadsanayso dalka dibaddiisa. Oo haysta sanado badan oo waayo aragnimo ah. Kooxdayada shaqaalaynta ayaa sugaysa inay ku caawiyaan. Dhanka taban, shaqaalaha dibada. Ayaa laga yaabaa inuusan lahayn khibrad ku filan. Weli waa awoodaa shaqo raadin tusaale ahaan qaybta amniga. Laakiin waxay qaadan doontaa waqti badan.
Waxaan kuugu shaqeynaa Dubai!
Riix sawirka si aad u dirto CV
Shaqo laga heli karo Dubai iyo Abu Dhabi!
Shaqooyinka Dubai ee Recruitment - Shirkadda Dubai City, Waxaan hadda u qornay Dubai. Sida xaqiiqda ah, shirkadeenu waxay leedahay shaqooyinka laga heli karo tubai iyo Abu Dhabi. Codso shaqo cusub oo leh CV-gaaga cusboonaysiinta maanta !. Magaalada Dubai iyo Abu Dhabi Guud ahaan waa laga hadlaa ka dib sannad ah koror ballaaran oo leh shaqooyin badan oo banaan. Xaaladahaas oo kale, Imaaraadku waa horumar iyadoo qiimaha saliida. Maalmahan gobolka GCC ayaa ugu dambeyntii bilaabay inuu maareeyo shaqooyin aad u wanaagsan waxayna bilaabeen barnaamijyo khaas ah ajaanibta.
Falanqaynta ugu dambeysa, kooxdeena dhigay shaqada raadinta barnaamijka xasilinta ee kor u kaca fursadaha shaqada iyo fursadaha shaqadaada. Marka la eego qodobbada, waxaynu leenahay nidaam dhexdhexaad ah oo abuuraya shaqo cusub shaqaale kasta oo ku shaqeeya 2018.
Ilaa waqtigan xaadirka ah, Shirkadda Magaalada Dubai waxay sahamin ka sameyneysaa loo shaqeeyayaasha 950 guud ahaan Imaaraadka Carabta. Marka hore, waxaan u abuurnay qaar ka mid ah talooyin loogu talagalay shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay Hindiya.
Shirkado badan sanadkan u balaarisay Dubai, iyada oo dhawr shirkadood oo yaab leh ay qorsheynayaan shaqo dhimis.
Hawlaha dhismaha ee qaybaha saliidda iyo gaaska weli wali ku sii kordhaya Sharjah Dubai, laakiin hoos udhaca Abu Dhabi.
In ka badan 35,000 Shirkadaha Dubai waa shaqaaleynta dekadaha shaqada iyo wakaaladaha shaqaaleynta.
Waxaan shaqo ku siinnaa Dubai Shaqaaleynta dadka ajnebiga ah oo leh shirkadda Dubai City.
Shaqooyinka Dubai ee Qorsheynta - Shirkadda Dubai City
Shaqooyinka Dubai - hagid dhamaystiran oo lagu helo shaqo
Shaqada Dubai waa wax walba oo ku saabsan mihnadda riyada ee dhinaca kale waxaad sidoo kale heli kartaa.
Inkastoo ay taasi run tahay haddii aad raadineyso inaad hesho cusub fursadaha shaqada ee Imaaraadka Carabta. Shirkadda Dubai City waxay leedahay war wanaagsan. Kuwa badan baa jira shaqooyin banaan oo shaqo oo badan oo magaalada ah oo iyagu way ka duwan yihiin. Si kastaba ha noqotee, hal shay, bay'adda shaqada iyo waqtiga shaqada ayaa noqon kara aad ayey uga duwan tahay wadankaagii hooyo. Si aad u tilmaanto habka shaqo raadinta ee Dubai fiiri maqaalkayaga waxaan ku qornay wax kasta oo aad ubaahan tahay inaad ogaato sida loo helo shaqooyinka Dubai.
Warkii ugu dambeeyay ee cusub shaqaale doonaya Dubai iyo Abu Dhabi. Qodob kale oo muhiim ah oo loogu talagalay qof walba oo xirfadle ah oo leh xirfad wanaagsan shaqo ka hesha UAE. Hal shay, dadka imanaya Dubai oo loo furay fikradaha shaqo ee cusub. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato shaqada aad raadineyso si ay u galaan Imaaraadka Carabta. Hoos kooxdeena ayaa ku tilmaameysa dhowr tilmaamood oo aad ka heli karto goobaha ugu fiican ee Bariga Dhexe. Websaydhani waxay kuu ogolaanayaan inaad ku fekeraan feker cusub oo ah meelo badan oo ka kala tirsan Dubai City iyo Abu Dhabi. Shaqooyinka Dubai Qoritaanka waa furahaaga guusha Bariga Dhexe.
Hadda waxaanu qoreynaa!
U hel aragti deg deg ah khibradda isticmaale ee ugu fiican irridda shaqada ee suuqa shaqada ee Bariga Dhexe. Waxaan sidoo kale isku dayeynaa inaan si fiican gacan uga geysanno bixinta macluumaadka qiimaha leh ee qof kasta oo shaqo doon ah. Guud ahaan, hadafkayagu waa inaan ku tusno shirkadaha ay yihiin sida ugu fiican ee loo qoro UAE.
Dhanka taban, waxaa jira goobo badan oo shaqo caan ah. Qaarkood waxay caan ku noqdaan caan, sidaa darteed waxaad had iyo jeer ka heli doontaa naftaada boqolaal musharaxiinta oo waxaad ku jiri doontaa safka weyn. Laakiin xaaladahaas, marna ha iska dhicin shaqo ku raadinta WhatsApp maxaa yeelay dhammaantiin isku mid baad u socotaan wadada shaqada ee Magaalada Dubai.
Hadafkayagu waa inaanu ku tusino meesha ay kuugu soo noqonayso Res Upload hel shaqo ee ugu mushaarka badan Dubai. Shaqooyinka Dubai ee Qoritaanka Bariga Dhexe.
UAE Xarunta Shaqada ee Dubai ee UAE iyo Shaqooyinka Dubai
Shirkad sharci ah ee shaqadayda raadinaya
SHIRKA MAGAALADA DUBAI
# No.1 SHIRKADAHA WANAAGSAN - Sare: Shaqada Shaqo ee loogu talagalay Adeegga Shaqada iyo Qorista ee UAE.
Shirkadda Dubai City - Shaqooyinka ku yaalla Dubai - Shirkadda Gawaarida iyo No.1 Bixiyaha Xirfadaha ee UAE. Waxan ka qoraynaa waxyaabaha ka dhacaya Imaaraadka.
Goobta shaqada ee Dubai City waa ciyaaryahan weyn oo ku jira shaqo raadinta bogga internetka. Guud ahaan, qoraalladayada waawayn ayaa halkan jooga si loogu caawiyo dadka kale ee shaqo doonka ah ee Dubai. Falanqaynta kama dambaysta ah, waxaad ka heli kartaa kaalin muhiim ah oo ka mid ah qorayaasha sida ugaadhsiga shaqada. Inta badan shaqaalaheena waayeelka ah iyo dadka ajnebiga ah ayaa ka soo jeeda Hindiya, Pakistan, iyo sidoo kale Sacuudi Carabiya. Dhinaca kale, raadinta shaqooyinka Dubai by wakiilada shaqaaleynta suuqa shaqada iyo xarumaha magaalooyinka shaqaaleynta, shaqaalaynta iyo shaqada deegaanka Bariga Dhexe.
Shirkadda Dubai City - Waxaan nahay Websiteka Legit ee Shaqooyinka ee Dubai
Isla markiiba, boggayaga ayaa bixiya mushahar sare oo loo qoondeeyay Shaqooyinka Dubai. Intaa waxaa dheer, waxaan adeegsanaynaa tikniyoolajiyad horumarsan si lagaaga caawiyo inaad ku riyootid riyo shaqo. Isutagga Imaaraatka Carabtu waa mid ka mid ah kuwa ugu doorka roon uguna raadinta badan ee riyooyinka shaqo doonka caalamiga ah iyo shaqo doonka Yurub. Dubai City waa meesha ugu fiican ee lagu tago iyo qaar badan oo ka mid ah waxay hirgeliyaan waayo-aragnimada ugu dambeysa ee helitaanka shaqada asaasiga ah ee warshadaha dhismaha.
Sababtan darteed, kooxdayadu waa mid ka mid ah ugu fiican ee soo saarista madaxda. Sidoo kale adeega qorista caalamiga ah kooxdeena waxay siisaa fursado badan oo shaqo oo badan dhamaan wadamada GCC. Tusaale ahaan, haddii aad shahaado ku leedahay maadada suuqgeynta waad awoodaa noo noqo murashax aad u wanaagsan. Iyada oo ay sabab u tahay adeegyada shirkadaheena, waxaan si gaar ah ula shaqeyneynaa India, Philippines, Saudi, Qatar, Shaqaalahaani Pakistani ah. Sidaa darteed, sidaas darteed qof kasta oo xirfadlayaal ah oo raadinaya shaqooyinka riyooda ee Dubai. Waxaanu siinaa shaqooyinka ugu sareeya ee UAE. Shaqooyinka Dubai Shirkadda Dubai City waa suurtagal.
Si aadan u lumin waqtigaaga waa inaad xaqiiqdii gelisaa Resume-gaaga iyo isku day in aad ku habboon tahay barnaamijka is-beddelada. Shirkadda Dubai City waxay sidoo kale bixisaa adeegyo shaqaaleyn cajiib ah warbaahinta bulshada. Iyo xitaa in ka sii badan. Waxaan ku shaqaaleyneynaa Mumbai iyo caalamka.
Shaqooyinka Dubai - Shirkadda Dubai City
Waxaan nahay caawimaad raadinta shaqo ee ugu fiican magaalada Dubai!
Shirkadaha kale ee 5 - Si aad u heshid shaqooyinka bannaan ee Dubai City
Tamarta iyo Nolol Wanaagsan - Shirkadda Magaalada Dubai
Bayt - Leading portal portal ee UAE
Qof kasta oo ka hadlaya sida loo helo shaqo Dubai. Waxa ugu horeeya ee lagu xasuusto Bayt waa mid ka mid ah goobaha ugu caansan ee shaqada loogu talagalay Wadamada Khaliijka ee fursadaha shaqo. Si aad u tilmaanto Goobtan shaqo waxaa ku jira Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Cumaan, Yemen, Kuweyt, Qatar, iyo Baxrayn. Waad ka dooran kartaa wadamada kale sidoo kale. Bayt ayaa xayeysiiya shaqooyin tiro badan ayaa bixiya maalin walba.
Caddaynta ugu badan ee kufsiga haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa adag shaqo raadinta shaqooyinka. Guud ahaan marka la hadlayo, waa inaad subax kasta warqad u dirtaa loo-shaqeeyeyaasha cusub. Waqti fog, waa inaad sidoo kale sameysaa fiid kasta adoo rajeynaya inaad ku riyootid boosaska riyadaada. Portal-kan ayaa sidoo kale si heer sare ah loogu qiimeeyay shaqooyinka ka jira Dubai ee Hindida.
Inta badan dadka shaqo doonka ah Jeclow UAE maadaama taasi wax ka beddeli karto noloshaada. Sababtaas awgeed shirkaddan Dubai ee ku taal UAE waxay boosaska bannaanka ka dhigtaa shaqooyin cusub maalinta iyo habeenka oo dhan. Sidaa darteed shaqooyinkooda shaqo ee wanaagsan waxay ku saleysan yihiin UAE. Dhinaca taban maxaa yeelay waa ay weyn yihiin sidaa darteed waad malaha sidoo kale hel fursadaha ka jira Carabta. Waqooyiga Afrika iyo xitaa Pakistan iyo Sri Lanka. Laakiin noocan oo kale ah Fursadaha shaqo helistu ma fududa in la helo.
Gulfuggent - Mid ka mid ah meheradda ugu fiican ee xirfadlayaasha ah ee loogu tala galay dalxiiska
Maya 3 Gulftalent.com
Iyadoo boggan shaqadan, si la yaab leh ayaad u dhisi kartaa dib u noqoshadaada xirfadeed. Si aad uhesho hab kale, si degdeg ah abuuray xirfad xirfadeed kaa caawin doona inaad adeegsato dhismay GulfTalent CV. Sababtaas awgeed, u isticmaal qaabkooda qaab dhismeedka CV iyo muuqaalkooda shaqadaada meel kasta oo aad uga ugaadhsato. Sidoo kale ka fiiri qaar ka mid ah muunadaha CV boggooda internetka.
Gulf-talent waa xaruntii shaqo-qorista ee Dubai ku salaysan. Tani Shirkadda Dubai waxa ay liiska shirkadaha 4,000 ku soo bandhigtay waddamada Khaliijka. Natiijo ahaan shaqaalayaasha iyo shaqaalaynta kireystayaasha adeegsiga adeegyadooda si ay u helaan tayo cusub. Si kale haddii loo dhigo, waxaa jira qaar ka mid ah shaqaaleyaal waaweyn oo kireystayaal ah, oo ay ku jiraan Daman, ADCB, iyo Etisalat.
Tani Shirkadda Dubai Hiring Company waxay siineysaa shaqooyin meelo ka baxsan gobolka Gacanka. Inkastoo aad ka heli doonto wax badan fursadaha shaqada ee Gulf hadaad shaqo raadinayso kaliya UAE. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaa jira tiro fuliyayaal ah oo jagooyin la heli karo oo aad heli karto oo aad joogsan karto ku riyooday Dubai.
MonsterGulf - Boggaga caalamiga ah ee xirfadaha ee dalalka GCC
Monstergulf waxay maamushaa laanta shirkadaha qorista ee caalamiga ah. Mashiinka waa shaqo aad uwanaagsan oo loo isticmaalo. Maadaama aad tahay xirfadle shaqo doon ah, shaqooyin ayaa laga heli karaa qaybaha baabuurta ee badan. Si kale haddii loo dhigo, bahal weyn oo ka caawinaya qurbejoogta xagga dhismaha iyo bangiyada guryaha. Taasi micnaheedu waa in la yiraahdo shaqadan iyo bogga shaqada waxaa suurtagal ah in shaqada lagu raadsado shaqo ahaan, gobolka ama warshadaha. Goobtani xirfadeed waxay kaloo u oggolaaneysaa dalabka shaqo ee khadka tooska ah ee loogu talagalay in lagu soo geliyo CV keydka macluumaadka waxayna ku siisaa talooyin iyo talo ku saabsan sida loo dalbado shaqooyinka Dubai.
Charterhouse - Goobta shaqo qorista ee Dubai City
Hay'addani waxay ka shaqeysaa Bariga Dhexe, iyo dabcan, wuxuu qorayaa shaqooyin kala duwan oo ka socda gudaha UAE. Tijaabo ahaan, shirkadan waxay bilawday UAE tan iyo 2004. Charterhouse wuxuu leeyahay boosaska loo heli karo dadka raba kuwa raadinaya shaqadooda koowaad ama labaad ee Dubai. Dhanka kale, qaar badan oo ka mid ah doorarkooda ayaa ah xirfadlayaal khibrad leh halkii ay ka dooran lahaayeen jagooyinka fudud ee hoose. Waxay sidoo kale ku takhasusaan fulinta aad u wanaagsan shaqaalaysiinta ee doorka fiican iyo shaqooyinka injineernimada.
Michael Page - Shaqooyinka goobta Dubai ku yaala ee UAE
Isla mar ahaantaana, shirkadda Michael Page waa caalami ururinta shaqaalaynta takhasuska leh. Xaqiiq ahaan, shirkadan waxay si adag ugu aasaastay suuqa magaalada Dubai. Sidaas darteed, waxay xafiisyo ku leeyihiin adduunka oo dhan. In kasta oo ay taasi run noqon karto Michael Page oo ay ku jiraan wadamada ugu wanaagsan iyo magaalooyinka ujeedada qoritaanka. Sida Jabaan oo ay weheliyaan Ireland iyo Australia. Intaas waxaa sii dheer, waxay kugu gelin karaan a Meelaha kala duwan laga bilaabo shaqo gelinta ilaa heerka maareeyaha ee Emirates Airlines.
Shaqooyinka Dubai - Noqo mid gaar ah oo raadso xirfad cusub!
Intaa waxaa dheer, haddaad rabto inaad joogtid UAE, waa doorashada ugu fiican ee qof kasta oo qurbajoog ah in diirada la saaro takhasuskooda maxalliga ah. Kuwaas oo ay ku jiraan adeegyo maaliyadeed, doorarka maamulka qaybta dhexe ee iibka iyo suuq geynta Imaaraatka dhexdeeda. Maaha in la xuso dabcan xilalka farsamada ee gaadiidka, wax soo saarka iyo warshadaha dhismaha iyo xeebta fog.
Hadda waxaanu qoreynaa shirkadaha dowladda
Shaqooyinka Dubai ee Diiwaangelinta Shacabka
Shirkadaha Dawlada ee ku yaala UAE oo qiimeyn ku sameynaya
Shirkadaha Dowladda ayaa asal ahaan ka aasaasay shirkado aad u wanaagsan Abu Dhabi iyo Dubai City toban sano ka hor. Intaa waxaa sii dheer, iyaguna way leeyihiin Waxay ku fidday dhammaan waddamada GCC oo halkaas ganacsi ka badan ka samayso halkaas. Inta badan shaqooyinka la xayeysiiyay waxay ku saleysan yihiin caasimadaha sida Doha, Dubai, iyo Riyadh. Sidaa daraadeed way ku weyn yihiin warshadaha maaliyadeed waxaana ay muhiim u yihiin UAE. Sidaas marka loo eego haddii aad tahay qof xirfad u leh shaqooyinka huteelada ama ku takhasusay injineernimada injineerka saliida iyo gaaska. Waxaa intaa dheer, dhismaha, injineerinka, baananka, IT ama warshadaha tafaariiqda. Waa in aad bilow inaad shaqo ka raadsato halkaas. Shirkadahaan la yaabka leh waxay mudan yihiin in la isku dayo.
Expo 2020 Career ee Dubai
Expo 2020 iyadoo la raacayo kobaca UAE. Suuqa shaqada iyo horumarka magaalada Dubai. Xaqiiqdii, waa inaad sahamisaa Bariga Dhexe suuqa shaqada iyo Expo 2020 waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu sameeyo. Dhanka kale, waxaad qayb ka noqon kartaa Expo 2020 Dubai safarka shaqo ayaa loo arki karaa fursadaha shaqada ee ballaaran ee fursadaha shaqada iyo fursadaha mutadawacnimada.
Xirfadda Expo waa la heli karaa ee loogu talagalay dadka si khaas ah iyo figrado fican. Si aad u dhigto qaab kale, haddii aad raadineyso inaad ku biirto kooxda Expo 2020 HR waa inaad noqotaa qof firfircoon, si sare ugu dhiiran boos cusub iyo qof ku dhiirrigaliyay kooxdaada cusub.
Waxaa jira wax ka badan 1,000 Wasaaradda Arrimaha Gudaha Shaqooyinka Dubai ee ku yaala 2018. Ma waxaad tahay qof shaqo doon ah oo soo galaya? Ama raadinta xirfad heer sare ah oo sareeya? Wasaaradda Arrimaha Guduhu waxay ka mid tahay kuwa ugu fiican. Guud ahaan, wuxuu ka shaqeeyaa 1,200 shaqooyinka bannaan si loo buuxiyo waaxyo kala duwan oo ka tirsan Dubai. Iyo qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa si fiican u bixiya qaybta shaqada. Codso halkan haddii aad raadineyso inaad shaqeyso Shaqooyinka Dawladda ee Imaaraadka Carabta. Keenso Resume-kaaga: Ku dar Resume-gaaga warshadan. Ka dibna waxbadan ka ogow inaad waqtigaaga ku lumiso Dubai City.
Waaxda Adeegyada Bulshada ee Dawlada Dubai ku raadineysa.
Dawladda Dubai ee Xirfadlaha Waaxda Kheyraadka Aadanaha ee musharrax sax ah. Xaaladdan oo kale, ujeeddada fursadan U oggolow wakaaladdu in ay noqdaan qof si fiican u deggan Dubai. Degmadu waxay mudnaanta siineysaa doorashadaada inaad ku biirto meheradda qoyskeeda sida ugu wanaagsan ee aad ugu biirtidna waa ogaanshaha ujeeddooyinka aasaasiga ah iyada oo loo marayo Qiimayaasha waxaa sameeyay Dowlada Dubai. Waxaa jira wax yar oo ay tahay inaad ogaato “Xisaabtanka, Tartanka, Wadashaqeynta cusub, daahfurnaan, iyo farxad".
Shaqooyinka la xiriira dowladda aad u baahan tahay inaad ku dhufato ugu yaraan. Tusaale ahaan, waxaad u baahan tahay inaad leedahay Waxbarashada MBA ee booska shaqsiga takhasuska ah.
Shaqooyinka TECOM Group
TECOM Group waxay bixisaa fursado shaqo oo kala duwan gudaha Dubai City, iyo shirkadani waa heshiis aad u weyn. Ujeedada laga leeyahay helitaanka murashaxiinta cusub ee shakhsiyaadka aqoonta leh iyo kuwa cusub ee qalin jabiyay. Kooxda Tecom waxay shaqaaleysiiyaan kharashyo iyo shaqo doonka maxalliga ah ee leh xirfadda saxda ah. Musharaxa leh aqoonsi shaqsiyadeed iyo tayo way fududaan kartaa inay shaqo la helaan.
Kooxda Tecom waxay shaqaaleysiisaa barkad awood badan oo dhaqameed ka socota Hindiya, Mareykanka, Kanada, Australia iyo Bariga Dhexe. Si kale loo dhigo, shirkaddu waxay awood u siineysaa xirfad doonka in si ka duwan looga fikiro dhaqanka Dubai iyo adeegyada. Sannadihii ugu dambeeyay ee 20, shirkaddu waxay siisaa tartan tartan ah faa'iido u lahaanshaha ugxanta shaqsi kasta. Iyada oo feejignaan xoogan la leh suuqa suuqyada ee sii kordhaya ee Dubai. Shirkadda waxay sameyneysaa maalgashi wax ku ool ah wadamada GCC shirkado yaab leh waxaadna noqon doontaa maamulaha haddii aad tahay qofka saxda ah.
Sababtaas darteed, Kooxda TECOM ee 2018-2019 waxay abuurtay maalgelin muddo dheer ah. Guud ahaan, tiro ka mid ah jagooyinka ka bannaan shirkadda dhexdeeda ayaa diyaar u ah in la buuxiyo. Tani si fiican u yaqaan Magaalada Dubai waxay shaqaaleysiisaa howlo kala duwan iyo kharashyo dhamaan heerarka kala duwan ee magaalada Dubai. Marka la soo koobo waa inaad soo dirtaa cinwaankaaga manhajka casriyeysan si loogu tixgeliyo furitaanka Tecom Group, fadlan Booqo Dubai Holding Career si aad u faah faahiso.
Shaqooyinka Dubai ee Qorshaynta Shirkadda Dubai City. Shirkadda ugu fiican ee shaqo doonka!
Shaqooyinka Dubai ee Dubai Dubai
Marka la eego qodobbadan, si toos ah u codso Dubai Holding iyo hel "Gov" Job iyo Dubai Holding. Waa inaad u dirtaa resume online aad u dirto Dubai City Holding. Ilaa wakhtigan xaadirka ah, wax waliba waa Shirkadda ugu wanaagsan ee ka shaqeysa Dalalka Gulf. Isla waqtigaan, xitaa waad ka abuuri kartaa digniino shirkadooda. Ugu dambayntii, ka codso shaqada iyo weydiimaha shaqo-bixiyeyaasha Dubai. Gaarsiinta shaqaalaynta tooska ah ee Dowlada ee Dubai. Waxaad ku gali kartaa resumeygaaga bogagga dowladda UAE.
Ku soo dhawoow Kooxda Xiriirka ee Dubai - Dubai Holding Shaqooyinka Dubai ee Shaqaalaynta Shirkadda Dubai City.
Hadda waxaad ka codsan kartaa shaqooyinka aad la leedahay Dubai Holding. Maareeyayaasha waxaa jira khibrado fara badan oo leh macaamiisha shirkadaha diirada saaraya bulshada ganacsatada, martigelinta, dalxiiska, hantida guryaha iyo isgaarsiinta iyo barista xirfadaha ganacsiga.
Qabashada Dubia ilaa 2009 waxay door muhiim ah ka qaadatay is badalka shaqada iyo shaqooyinka shaqooyinka guud ahaan warshadaha. Wadajir ahaan, shirkadaha waxay matalaan ka qeybgalka dhammaan warshadaha 12, iyagoo had iyo jeer wadista taageerada iyo koritaanka waara, dhaqaalaha hal-abuurka leh ee la jaanqaadaya aragtida Isutagga Imaaraatka Carabta ee 2021.
Haddii aad tahay musharaxa caalamiga ah iyo raadinta xirfad kuwaas oo siinaya fursad ay kula shaqeeyaan darajooyinka caalamiga ah, tababarka dhameystiran iyo horumarinta Dubai Holding Xirfadaha suuq-geynta waa adiga. Bilow shaqadaada cusub oo ka mid noqo a jawiga xawliga leh ee xawliga leh ee magaalada Dubai. U dir Resumeygaaga Dubai Holding.
Waxaan hadda shaqaaleynayna Dubai!
Hal shay oo dheeri ah oo la xasuusto ayaa ah Dubia waxay ku kacdaa dambi aad u hooseeya. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, miyaad dooneysaa inaad hesho a Shaqada Dubai in kasta oo ay taasi run tahay waan ku caawin karnaa xitaa hadaad tahay qof da 'yar. Adiga oo ku bilaabaya shaqo cusub ee The UAE!